Siddeed waxyaabood oo laga bartay barbarihii kooxaha Borussia Dortmund iyo Liverpool ee Europa League… (Maxay ka dhignaayeen goolashii Origi iyo Hummels?) – Gool FM
Siddeed waxyaabood oo laga bartay barbarihii kooxaha Borussia Dortmund iyo Liverpool ee Europa League… (Maxay ka dhignaayeen goolashii Origi iyo Hummels?)
Haaruun April 8, 2016
(Dortmund) 08 Abriil 2016 – Kooxaha Borussia Dortmund iyo Liverpool ayaa barbaro 1-1 ku kala baxay kulanka lugta hore ee siddeed dhammaadka Europa League oo kooxda Reds lagu soo dhaweeyey Waddanka Jarmalka.
Tababare Klopp ayaa dib ugu laabtay dalka laga jecel yahay ee Jarmalka, waxaana ciyaartii uu kooxdiisii hore kula ciyaaray garoonka Signal Iduna Park ay ku soo dhammaatay barbaro 1-1, iyadoo labada gool ee kulan ay kala dhaliyeen Origi 36’ daqiiqo iyo Hummels 48’ daqiiqo.
Kulanka lugta labaad ee ka dhici doona garoonka Anfield ayaana kala go’aamin doona labadan kooxood middii ka haysa tartankan.
– Xaqiiqooyinka kulankan –
>- Borussia Dortmund ayaa dhalisay shan gool oo ka yimid gees laadka ama koornada tartanka Europa League xilli ciyaareedkan, waana in ka badan kooxaha kale.
>- Divock Origi ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey 11 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Liverpool.
>- Mats Hummels ayaa dhaliyey goolkii 70-aad ee ay Borussia Dortmund garoonkeeda ku dhaliso tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
>- Liverpool waa kooxda kaliya ee aan wali laga adkaan oo unbeaten ah tartanka Europa League xilli ciyaareedkan.
>- Divock Origi ayaa ka mid noqday sagaal ciyaaryahan oo kala duwan oo kooxda Liverpool gool ugu dhaliyey tartanka Europa League xilli ciyaareedkan.
>- Mats Hummels ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey tartammada Yurub tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2013-kii, markaasoo uu kooxda Shakhtar Donetsk gool kaga dhaliyey Champions League.
>- Divock Origi ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreyey, tan iyo markii kooxdiisa Liverpool ay 6-0 ku garaacday Aston Villa bishii Febraayo.
>- Borussia Dortmund ayaa kaliya hal kulan laga adkaaday 23-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay garoonkeeda tartammada oo dhan, 19 kulan ayey guul gaartay, saddex barbaro ayey gashay, hal jeerna waa laga adkaaday.
Real Madrid oo war wanaagsan ka heshay dhaawaca Karim Benzema
XAN: Arsenal oo isha la raaceysa saddex wiil xagaaga nagu soo foolka leh